Onye isi oche okpuru ọchịchị Nnewi Sawụtụ n'oge gara aga, bụ maazị Chieloka Okoye mere ka a mara nke a ma kpọọkwa oku ahụ na mmemme ịkwalite omenala Igbo, bụ nke a chịkọbara site n'aka Nwaada Omenala Mbanese.
Mmemme ahụ, bụ nke weere ọnọdụ n'ụlọ ezumezu Akwaihedị bụ nke dọtara imirikiti mmadụ nke gụnyere ụmụakwụkwọ, ndị ntoribịa, ndị eze ọdịnala, ndị ọrụ oyibo, ndị nkuzi, ndị na-ede akwụkwọ, tinyere ọtụtụ ndị ọzọ. A nọkwara n'oke mmemme ahụ wee chịkọba asọmpi dị iche iche n'etiti ụmụakwụkwọ na ndị ntorobịa sitere obodo ise mejuputara "Mbanese" bụ nke dị n'okpuru ọchịchị Nnewi Sawụtụ na steeti Anambra, nke gụnyere, Ebenatọ Ozulọgụ, Akwaihedị, Ọsụmenyi, Ezinifite na Ụtụh Mbadike.
N'okwu ya na mmemme ahụ, maazị Chieloka Okoye, bụ onye kwàdoro asọmpi edemede n'asụsụ Igbo n'etiti ndị ntorobịa Mbanese, nke isiokwu ya bụ "Omenala Steeti Anambra", kọwara omenala dịka isi sekpụ ntị n'ebe obibi ndụ mmadụ dị, ma kwuo na mmemme ahụ bụ nke kwesiri ekwesi, iji wee kụziere ụmụafọ Igbo na-etolite etolite omenala Igbo, ọ kachasị ugbu a asụsụ Igbo na-anwụnyụzị anya ma na-edì mmiri kwa ụbọchị.
Ya bụ nwa amadi, bụkwa onye ji aha otu ndọrọ ndọrọ APGA were apụta ịzọ ọkwa onye nnọchi anya ọgbọ nta nkwado Nnewi Sawụtụ nke abụọ, kọwara APGA dịka otu ndọrọ ndọrọ nwere mmasị pụrụ iche n'ichekwaba njirimara ndị Igbo, too onye haziri mmemme ahụ, ma kwuo na nke ahụ so n'otu n'ime ihe na-echu ya ụra mgbe niile, bụ ịkwàdo ndị ntorobịa n'ụzọ dị iche iche, na ịkwalite njirimara na omenala Igbo n'ebe dị elu.
Na mbụ n'okwu ya, onye chịkọbàra mmemme ahụ, bụ Nwaada Dera Amarachi, onye bụkwa Nwaada Akwaihedị ma bụrụkwa Nwaada Omenala na Mbanese, kwuru na mmemme ahụ so n'otu n'ime ntụnye nke ọ na-eme n'ụzọ dị iche iche, iji wee kwalite asụsụ, njirimara na omenala Igbo, dịka Nwaada Omenala ọ bụ. O kwuru na mmemme ahụ bụ nke were abalị anọ, bụ a malitere site n'ịbàgide njem n'ụlọakwụkwọ dị iche iche na Mbanese, inye ha nkuzi, na ime ihe mmụta ndị ọzọ dị iche iche, wee ruo n'ụbọchị nke ikpeazụ ahụ, bụkwa ụbọchị a nọzịrị wee nye nkuzi pụrụ iche, mee ejije na ihe ngosi dị iche iche n'asụsụ Igbo, ma kpọpụtaziekwa ụlọ akwụkwọ na ndị ntorobịa tuuru ugo n'asọmpi ahụ dị iche iche a chịkọbara n'asụsụ Igbo.
Ndị ahụ tuuru ugo n'edemede nke a chịkọbara n'ogoogo ụlọ akwụkwọ Sekọndịrị gụnyere:
"Ụtụh High School" - Ndị Nke Mbụ
"Ọsụmenyi High School" - Ndị Nke Abụọ
"Community Secondary School Akwaihedị" Ndị Nke Atọ
Ndị tuuru ugo n'asọmpi edemede nke ndị ntorobịa gụnyere:
Nwaada Onyinye Vivian - Onye nke mbụ
Nwaada Elizabeth - Onye nke abụọ
Obere maazị Somtochi Dozie - Onye nke atọ.
Ndị ọzọ kwuru okwu na mmemme ahụ gụnyere: eze ọdịnala Akwaihedị, bụ Igwe J.O.C. Onebụnne; onyeisi LEO Foundation, bụ maazị Emeka Luis, Nwaada Mbanese, bụ nwaada Ọkparaụzọma Chinyere, tiịyere ọtụtụ ndị ọzọ, ndị bịara.